Saddex qof oo gaajo iyo oon ugu dhintay abaaraha aawadood; Caasha Geelle oo la socota wafdiga ayaan xaaladda ka waraysanay. – Radio Daljir
Bender-bayla, April 13 – Haweenay iyo laba caruur ah ayaa gaajo iyo ugu dhintay degaanka Kulule oo ka tirsan gobolka Bari.
Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland Caasha Geelle Diiriye oo ka mida wafdi ballaaran oo u kuur-galaya xaaladda abaaraha oo maraya xeebaha bari ee Puntland, haatanna ku sugan degmada Bender-beyla ayaa sidaa Daljir u sheegtay goor dhow.
Wasiiraddu waxa ay sheegtay in ay arrintani muujinayso heerka khatarta ah ee ay marayso xaaladda abaaruhu, waxayna dhanka kale ka warantay saamaynta guud ee abaaraha.
Saamaynta abaaraha oo ka sii daraya xeebaha bari ee Puntland iyo wafdigii xaqiiqo-raadinta oo Beyla ku hoyanaya.
Bandar-bayla, April 13 – Wafdigii ka socday Puntland iyo Qaramada Midoobey ee dhawaanahan socdaalka ku marayey xeebaha durugsan ee Puntland ayaa arkay xaalad aad u ba?an oo laga dhaxlay abaaraha haatan ka taagan in badan oo ka mida degaannada Puntland.
Xuseen Cabdi Jimcaale Madar oo ah wariye ka tirsan idaacadda Daljir lana socda wafdiga ayaa sheegay inay ku arkeen dhulkii ay marayeen dad aad u tabaalaysan oo aan haysan habayaraatee wax baad iyo biyo ah iyo xoolo xerada gabbalku ugu dhaco waaguna ugu baryo oo u baahan in la quudiyo iskabadaa in la manaafacaadsadee. Dhulka ayaa guud ahaan abaartu dhallan-rogtay oo ku jira xaalad nabaad-guur ah.
Wafdiga ayaa kulamo la leh mas?uuliyiinta degmada Bendar-bayla ee gobolka Bari halkaas oo ay xalay gaareen, waxayna isla maanta socdaal gaaban kaga soo laabteen tuulada Dhuudo oo u dhaw Bendar-bayla oo ay wafdigu hadda joogaan.
Mas?uuliyiintan oo ku safraya in ka badan afartan gaari ayaa u kuur-galaya xaaladda dhabta ah ee ka jirta deeganada ay marayaan oo ka mid ah dhulka ay abaartu sida daran u saamaysay, sidoo kalana waxay eegayaan xaaladda amni iyo saamaynta burcad-badeedda oo ah dhibaatada labaad ee ka jirta deegaanadaasi marka laga yimaado abaaraha.
Sida uu noo soo sheegay wariyahayaga, wafdiga ayaa caawa ku hoyanaya magaalada Bendar-bayla waxayna subixii u safrayaan magaalooyinka Baar-gaal iyo Xafuun oo ka tirsan deegaanada fog-fog ee gobolka Bari, kana mid ah dhulka abaarta iyo burcaddu saameeyeen. Kolanyadan oo safarkooda bilaabay horraantii todobaadkan ayaa maray adeegaanno badan oo ka tirsan gobollada Nugaal, Kar-kaar iyo Bari oo dhammaantoodba abaartu si ba’an u saamaysay.
Waxaa isasoo taraya cabsida laga qabo in la waayo xilligii Gu?ga oo la filayey inuu biloowdo horraantii bishan, taas oo haddii ay dhacdo keeni karta masiibo qaran.